Jaamacada Jigjiga Oo Sanadkan 2009 T.I Qaabishay 5400 Oo Arday - Cakaara News
Jaamacada Jigjiga Oo Sanadkan 2009 T.I Qaabishay 5400 Oo Arday
Jigjiga(cakaaranews)Isniin 24ka, October 2016. Jaamacada jigjiga oo kamid ah jaamacadaha dalka JDFI ayaa sanadkan 2009 T.I qaabishy arday tiradoodu kor u dhaafayso 5400 oo arday iyadoo waxbarashadana ay sii wateen arday kabadan 5300 oo arday.
Hadaba, madxwayne kuxigeenka jaamacada jigjiga ee dhanka waxbarashada iyo cilmi baadhista mudane Siciid Maxamed oo u waramay warbaahinta deegaankaayaa sheegay in diyaargaraw balaadhan ay ka samaysay dardargalinta baris barasho iyo adeeg bixinta arday tiradoodu kabadantahay 10700 oo arday iyadoo 5400 oo arday ay yihiin ardayda cusub ee sandkan jaamacadu qaabishay. Wuxuuna intaa kudaray madaxwayne kuxigenku in jaamacada ay u dhamaystiran tahay dhamaan adeegyadii baris barasho iyo waliba adeegyadii kale ee dhanka nolosha aradayda ahaa.
Sidookale madaxwayne kuxigeenka ayaa tilmaamay in jaamacadu ay bixiso culuum aad u badan islamarkaana ay waxbarashada u bixiso siyaabo kala duwan sida waxbarashada caadiga ah ee Regularka, waxabarashada Fogaanta (Distance education) iyo waliba waxbarashada labarto Summer ka.
Ugudanbayna waxaa iyana dhankooda kahadlay ardaydii waxbarashada ku siijirty ee jaamacada jigjiga oo sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin in jaamacadu qaabisho arday saas ubadan islamarkaana ay sifiican usoo dhawanayaan ardayda cusub. Iyagoo carabka kudhuftay in waxbarashadiina ay sifiican ugu bilaabatay iyaga.